PressReader - Isolezwe: 2018-05-18 - Kuyimvelo ukusaba kodwa makube wokuhlelekile
Kuyimvelo ukusaba kodwa makube wokuhlelekile
UKWESABA kuyimvelo. Kungenxa yalesi sizathu umuntu nomuntu enento ayesabayo emhlabeni. Abantu bayehluka ngezinto abazesabayo kodwa bonke besaba ukufa ngendlela efanayo. Uma sewukhuluma indaba yokufa ubona bonke abantu begajwa wuvalo kucace ukuthi abayifuni nakuyizwa indaba yokuyokwelusa amadada. MaSolezwe, okaVolos akahlose khona ukuthi anethuse ngokufa ngoba uyazi ukuthi niyakwesaba ngenxa yokungabi naso isiqiniseko sokuthi niyophelela ezulwini noma esihogweni.
Kule ngosi yanamuhla ngifisa sibuke ngeso elibanzi inkinga yokuthi abantu basabe nezinto okungafanele bazisabe.
Ngiyazi ukuthi kunabantu abazothi ngiqamba amanga uma ngithi kunabantu abesaba iSolezwe, uma uthi uthenga iSolezwe uzwe umuntu ethi unesibindi awesabi yini ukuthi lizoveza izimfihlo zakho.
Omunye athuswe yizihloko zeSolezwe ezibona zichonywe emgwaqweni athi akasafuni nokuze alifunde ngoba usebonile liqonde yena nabantu ahambisana nabo. Kunezindawo lapho kubaleka khona abantu bacashe uma uthi sekufike nezintatheli zeSolezwe, uma uthi uyabuza ukuthi zenzeni izintatheli bathi besaba ukuthi zizobhala ngabo.
Isifo sokwesaba sisabalele kakhulu ngoba kukhona ngisho abantu abesaba imali, umuntu akhulume angabi namahloni athi yena akafuni ukuphatha imali ngoba izomdonsela izigebengu. Kunabantu abathi bancamela ukuphila isikhathi eside bempofu ngoba ukuba nemali eningi kwenza umuntu asheshe afe ayongena esihogweni.
MaSolezwe ngicela ningikholwe uma ngithi kunabantu abawesabisa okwenyoka umshado, uma uthi uxoxa ngendaba yokuthi kufanele kushadwe umuntu avele ajike athukuthele kucace ukuthi umsondeza entweni angafuni ukusondela kuyona. Umuntu onenkinga yokwesaba umshado akulula ukumsiza umqinise idolo uthi kuyaphileka emshadweni ngoba uvele akhuze ibhadi athi uzoqeda inkululeko yakhe.
OkaVolos akaqambi amanga uma ethi kunabantu besilisa abayisaba kabi ingane, uma uke wakhuluma nabo wafaka indaba yengane bavele baphele emehlweni. Baningi abesifazane abangofakazi bokuthi lwaluvutha amalangabi abo kodwa kwathi kungafika izingane amadoda abaleka athi galo yephuka.
Ucwaningo luyakuveza ukuthi amadoda amaningi ayazesaba izingane ngoba azibuka ngeso lokuthi zingabadli bemali.
Bakwethu ngiyaphinda ngiyasho ukuthi ukusaba kuyinto ekhona kodwa akufanele umuntu esabe ngendlela engahlelekile. Kuwukusaba okungahlelekile ukuthi umuntu athi akasifuni isibhamu uyasesaba ngoba sidubula abantu, uma uthi uyayihlaziya le nto ayishoyo ubone ukuthi uyabheda ngoba asikho isibhamu esivele siziqhumele sidubule. Umuntu othi usaba isibhamu usuke ezidlalela ngokusaba kwakhe ngoba kufanele esabe umuntu okunguyena odubula ngesibhamu.
Kunabantu abaze bacimeze ngenxa yokwesaba ummese ocijile kodwa awukho ummsese owake wagxuma wagwaza umuntu.
Kungezwakala kuyihaba uma ngithi kunabantu abesaba irenki yamatekisi, kunomuntu othi uma umfonela umtshela ukuthi userenki avele akuthethise akubuze ukuthi uhlaleleni lapho. Uma umtshela ukuthi uzipholele erenki yamatekisi umuzwe ebubula ethi ngelinye ilanga uyohlangana nenyoka iphuza umhluzi erenki.
Namuhla ngigugile angikaze ngizwe kuthiwa irenki yamatekisi ibulele umuntu, uma umuntu eziphathelwe wukwesaba kufanele esabe izinkabi ezidubula abantu.
Udaba lwezinkabi luyinkinga ngoba azidubuli erenki kuphela ngoba ziyakudubula ngisho usesitolo uthenga amaveji.